Bagan Keyboard Pro Version 1.5.8 APK | မောင်မင်းသား
Home » ကွန်ပြူတာဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲလ်များ , ဖုန်းနည်းပညာ ,ျWebcam Max , ဘလော့နည်းပညာ » Bagan Keyboard Pro Version 1.5.8 APK
Bagan Keyboard Pro Version 1.5.8 APK
Android ဖုန်းပိုင်ဆိုင်သူတွေအတွက် Bagan Keyboard Pro Version 1.5.8 ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပေါ် ဗားရှင်းပါ။ ပိုသိချင်ရင်တော့ မှာ http://adf.ly/UtLlJ အတိအကျဖတ်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။ Bagan Keyboard ကအရမ်းကောင်းပါတယ်ဗျ။
Bagan Keyboard Pro Version 1.6.8 ထွက်ရှိပါပြီခင်ဗျာ။ Google Play Store နှင့် Kanaung Store တို့တွင် အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ။ ယခု Version တွင်
၁။ Jelly Bean OS သုံး ဖုန်းများတွင် ရှိသော စာလုံးမမှန်သည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းထားပါသည်။
၂။ Unicode ဖြင့်ရေးလိုသူများအတွက် Unicode ပါဝင်ပါသည်။
၃။ Keyboard ၏ စာလုံးများကို မူလထက် အနည်းငယ် ထပ်မံကြီးထားပါသည်။
၄။ Keypad ကြီးကြီး ရိုက်လိုသူများအတွက် Keyboard Size ကို စိတ်ကြိုက်ချိန်နိုင်အောင် Setting ထဲတွင် ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၅။ စာလုံးဖျက်ရန် အတွက် Cursor ကို အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။ (Space Bar ကို နှစ်စက္ကန့်ခန့်နှိပ်ပါ။)
ယခင် Feature များအဖြစ်
၆။ မြန်မာစာလုံး အားလုံးကို ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ (စာလုံးဆင့်များအတွက် ကီးဘုတ် အလည်တွင်ရှိသော ~ ကီးကိုသုံးပါ)
၇။ အသံဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာ ရေးသားခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
၈။ မြန်မာစာလုံးများအတွက် Auto Complete Features ပါဝင်ပါသည်။
၉။ မိမိ မကြာခဏ ရိုက်လိုက်သော စာလုံးများကို Auto Learn လုပ်ပေးသော စနစ်ပါဝင်သောကြောင့် စာရေးသားရာတွင်လွယ်ကူပါသည်။
၁၀။ မိမိမှတ်သားလိုသော စာလုံးများကိုလဲ မှတ်သားထားပြီး Auto Complete List ထဲတွင် ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် စာရိုက်ရာတွင် မှန်ကန် မြန်ဆန် လွယ်ကူစေပါသည်။
၁၁။ -ါရေးရန်မလိုပဲ -ာ ကိုရေးရုံဖြင့် Auto ပြောင်းပေးသော Smart Zawgyi Feature ပါဝင်ပါသည်။ ( "ပါ" ကို ရေးလိုပါက "ပ + -ာ" ဟုရေးပါ Auto "ပါ" ဟု ပြောင်းသွားပါမည်။)
၁၂။ Double Tap Feature ပါဝင်သောကြောင့် စာလုံးအပေါ်တွင် အပြာရောင် စာလုံးရှိသော ခလုပ်များကို နှစ်ချက် ဆင့်နှိပ်ပါက Shift နှိပ်စရာမလိုပဲ ရိုက်နိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ- "ရ" ကို ရိုက်လိုလျှင် "၇" ကို နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။)
၁၃။ အဆင်မပြေမှုများအတွက် Email ပို့၍သော်လည်းကောင်း၊ ယခု Post တွင် Comment ပေး၍သော်လည်းကောင်း၊ Google Play Store တွင် Comment ပေး၍ သော်လည်းကောင်း ပြောကြားနိုင်ပါသည်။ အတတ်နိုင်ဆုံး အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးသွားပါမည်။
၁၄။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် Version အသစ်များတွင် ထည့်သွင်းလိုသည်များကို အကြံပြု တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၁၅။ အခမဲ့ Share/Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၁၆။ ကျွန်တော်တို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပါက Playstore တွင် Rating များ ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
New Feature For Version 1.5
- Typographic Correction (Smart Zawgyi)
- Read/Write fixes for Jelly Bean Devices
- Suggestions renewed
- Quick Subscript Key added
- Swipe up to SHIFT
- Double Tap for commonly used Shifted Characters
Posted by mg minthar at 7:20 PM
Labels: ကွန်ပြူတာဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲလ်များ, ဖုန်းနည်းပညာ,ျWebcam Max, ဘလော့နည်းပညာ
Android ဖုန်းဆိုင်ရာဆော့ဝဲလ်များ (29)
Facebook ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ (5)
Mobile AntiVirus Security APK (3)
Nero 2014 (2)
Webcam Max (2)
ကွန်ပြူတာဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲလ်များ (54)
ဖုန်းအတွက် Game များ (4)
အတိုအစ နည်းပညာများ (23)
Maxthon Cloud Broswer x4.1.0.4000
Clothes for photoshop
Huawei Y321-C00 firmware တင်နည်း
Posted by စိုင်း စိုင်းလိတ် Friday, May 2, 2014 Huawei Y321-c00 firmware တင်နည်းလေးပါ..မသိသေးတဲ့ သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျ ...
ANDROID က﻿နေ ထီ﻿ပေါက်﻿စဉ်﻿တိုက်﻿ နိူင်﻿ရန်﻿အတွက်﻿ပါ။ ထီ﻿ပေါက်﻿စဉ်﻿တိုက်မည်﻿ဆိုပါက အင်﻿တာနက်﻿ ခဏဖွင့်﻿﻿ပေးထားပါခင်﻿ဗျာ.... ပရိတ်﻿သတ်...
ဝိုင်းစုခိုင်​သိန်း " ခါချ​နေရတယ် "
ဝိုင်းစုချစ်သူငယ်ချင်းများအတွက် အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Album လေးဖြစ်တဲ့ " ခါချနေရတယ်" ဆိုတဲ့ အခွေသစ်လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်အ...
Facebook Fan Page ဖွင့်နည်းစာအုပ်
ကျွန်တော်အခုတင်ပေးမှာက တော့ Facebook မှာလန်းခြင်သူများအတွက် Facebook Fan Page ဖွင့်နည်းစာအုပ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
လူတွေ ရေချိုးသလိုပဲ လက်တော့တွေလည်း ရေရှည်ထားခံဖို့အတွက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အရင်တစ်ခါ ဘယ်...
Y321-C00 Network unlock tool
chat box ကညီလေးတယောက်တောင်းထားလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်တဲ့သယ်ရင်းတွေလဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်Y321-C00 Network unlock Tool ဖြစ်﻿...
myanmar photoshop (နည်းပညာများ)
မြန်မာပိုတိုရှော့ နည်းပညာကိုလေ့လာနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပါ ကျွန်တော်လဲကြိုးစားနေတဲလူငယ်လေးပါ ကြိုးစားရင်းကျွန်တော်သိတဲ့ လင့်လေးကိုပြန်တင်ပေးလို...
TMPGEnc Video Mastering Works 5.0.6.38 Full Key
ရောက်လာသူပေါင်း အေးချမ်းကြပါစေ.. ဒီကောင်လေးကတော့ videos တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တည်းဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်မလိုအပ်တဲ့အပိုင်း တွေကိုဖြတ်ထုတ်နို...
Photoshop သမားများအတွက် ရှိထားရမယ့် Plug-in တစ်ခု Noiseware Plug-in 5.0.0.7 Full
Photoshop ဟာ ဓါတ်ပုံသမားတွေအတွက် အဓိကသုံးစွဲနေတဲ့ Software တစ်ခုပါ. ကျွမ်းကျင်ရင်ကျွမ်းကျင်သလို ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ...
Google Translate တွင် Unicode ဖြင့် မြန်မာဘာသာမှ ဘာသာပေါင်း ၉၀ ကျော်သို့ ဘာသာပြန်ဆိုနိုင် ပြီဖြစ်
Google Translate တွင် Unicode ဖြင့် မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ လည်းကောင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ လည်းကောင်း ပြန်ဆိုနိုင်ပြီ...
Copyright © 2011. မောင်မင်းသား - (နည်းပညာပြန်လည်မျှဝေသူ)